Daawo sawirrada: Xaafad ka mid ah Muqdisho oo loo fidiyey gurmad biyo dhaamin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daawo sawirrada: Xaafad ka mid ah Muqdisho oo loo fidiyey gurmad biyo dhaamin
Mareeg.com: Magaalada Muqdisho laguma yaqaano biyo la’aan am xitaa biyo yari, hase ahaatee maalmahaan xaafad ka mid ah Muqdisho ayaa u baahatay in loo fidiyo gurmad biyo dhaamin ah.
Xaafadaas waa qeybo ka mid ah Juungal oo ka tirsan degmada Yaakhshiid, waxaa 11-kii bishaan halkaas ka dilaacay xanuun dilay ku dhawaad 10 qof, kaasoo loo badiyey in laga qaaday biyaha ceel waqoobay oo xaafaddaas ku yaalla.
Waxaa isbitaalada magaalada la dhigay dad ka badan labo boqol qof, kuwaasoo qaarkood weli Isbitaallada jiifaan.
Dowladda Soomaaliya iyo Hay’ado caalami ah ayaa biyah ceelka laga shakiyey kula maqan baaritaan debadda ah, iyadoo ceelkaas shaqada laga joojiyey sida uu sheegay maamulka gobolka Banaadir.
Hadaba Shirkad Horumarinta Biyaha Soomaaliya ayaa xaafadaas maalin kasta geysa booyado biyo sida, iyadoo dadka sidaas biyo lagu siiyo maadaama ceelkii ay ka cabi jireen la xiray.
Shirkadda biyaha siineysa shacabka waxaa gudoomiye ka ah Sheekha Muudey Gacal oo ah shaqsi laga yaqaano Muqdisho horena siyaasada ugu soo jirey.
Mid ka mid ah howlwadeenada shirkadaas ayaa warbaahinta u sheegay inay tabarucaada biyaha ee ay u fidinayaan dadka xaafadda Juungal ay soo bilaabeen Khamiistii ku beegneyd 11-kii bishaan, islamarkaana ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay dadku dib kaga helayaan adeegoodii biyaha ee laga xirey.
Howlwadeeenkaan wuxuu sheegay in maamulka degmada Yaaqshiid ay iska kaashteen sidii ay si nabad ah dadkaasi ugu gaarsiin lahaayeen biyo nadiif ah.
Gurmadka biyaha ee Shirkadda Horumarinta Biyaha Soomaaliya u fidisay dadka ku nool qeybo ka mid ah xaafadda Juungal ayaa noqday mid aad loo soo dhaweeyey, maadaama xilligaan xaafaddii ay ay go’aan biyaha qasabaduhu keenaan ay ku adagtahay iney helaan gaari-dameeroo biyo u keena.
Midowga Yurub iyo IGAD oo raba in Axmed Madoobe dhaqangeliyo heshiiskii uu la galay DF Soomaaliya
Australia: Nin hubeysan oo dad badan ku afduubtay baar ku yaalla Sydney (Sawirro)